Amim-pahatokisana eo alohan'ny seza fiandrianana - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Journal succession > 2017-02 mpandimby ny Magazine > Amin'ny fahatokiana eo anoloan'ny seza fiandrianana
Ao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo 4,16 Hoy izy: “Koa aoka isika hanatona ny seza fiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana amin’izay andro ilantsika famonjena”. Taona maro lasa izay dia nandre toriteny momba io andininy io aho. Tsy mpomba ny filazantsaran’ny fanambinana ny mpitory teny, fa nasehony mazava tsara fa tokony hivavaka amin’Andriamanitra amim-pahatokiana sy amin’ny fisandratan-doha amin’izay tiantsika isika. Raha mahasoa antsika sy ny olona manodidina antsika izy ireny, dia hataon’Andriamanitra izay hitranga koa izany.
Eny, izany indrindra no nataoko ary fantatrao izay? Tsy nomen'Andriamanitra ahy izay zavatra nasaiko nataony. Alao sary an-tsaina ny fahadisoam-panantenako! Nahatafintohina kely ny finoako izany satria nahatsapa aho fa manome finoana lehibe an'Andriamanitra aho amin'ny fangatahana azy zavatra ambony amin'ny lohako. Tamin'izay fotoana izay dia tsapako fa ny tsy fahatokisanako ny zavatra rehetra dia nanakana ahy tsy hahazo ny zavatra nangatahiko hataon'Andriamanitra. Manomboka hianjera ve ny rafitry ny finoantsika raha tsy omen'Andriamanitra izay tadiavintsika isika, na dia fantatsika tsara aza fa tsara indrindra ho antsika sy ny olon-drehetra? Tena haintsika ve izay tena mahasoa antsika sy amin'ny olon-drehetra? Angamba mieritreritra an'izany isika fa raha ny tena zava-misy dia tsy fantatsika. Hitan'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra ary fantany ny zavatra rehetra. Izy irery ihany no mahalala izay tena mahasoa ho antsika tsirairay! Tena ny tsy fahatokisana antsika no manakana an'Andriamanitra tsy hanao zavatra? Inona no dikan'ny hoe mitsangana am-pahatokiana eo anoloan'ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra?
Ity andalan-teny ity dia tsy miresaka momba ny fijoroana eo anatrehan’Andriamanitra miaraka amin’ny karazana fahefana izay fantatsika - fahefana feno herim-po sy tapa-kevitra ary sahy. Ny andininy kosa dia mampiseho ny tokony ho endriky ny fifandraisantsika akaiky amin’i Jesosy Kristy, mpisoronabentsika. Afaka miresaka mivantana an'i Kristy isika ary tsy mila olon-kafa ho mpanelanelana - tsy misy pretra, mpitondra fivavahana, mpampianatra, mpitsikilo na anjely. Ity fifandraisana mivantana ity dia zavatra tena miavaka. Tsy vitan’ny olona talohan’ny nahafatesan’i Kristy izany. Nandritra ny vanim-potoan’ny Fanekempihavanana Taloha, ny mpisoronabe no mpanelanelana amin’Andriamanitra sy ny olona. Izy ihany no nahazo ny toerana masina indrindra (Hebreo 9,7). Niavaka io toerana niavaka tao amin’ny tabernakely io. Noheverina fa teo no nisy ny fanatrehan’Andriamanitra teto an-tany. Lamba na ridao no nanasaraka azy tamin’ny sisa tamin’ny tempoly, izay navela hipetrahan’ny olona.
Rehefa maty noho ny fahotantsika Kristy, dia triatra nizara roa ny efitra lamba7,50). Tsy mitoetra ao amin’ny tempoly nataon’olombelona intsony Andriamanitra (Asa 1 Kor7,24). Ny tempoly dia tsy lalana mankany amin’Andriamanitra Ray intsony, fa izany sy ny fahasahiana. Afaka milaza amin’i Jesosy ny fihetseham-pontsika isika. Tsy ny fanehoana fanontaniana sy fangatahana feno herim-po no tiantsika hotanterahina. Ny hoe manao ny marina sy tsy misy tahotra. Izany dia momba ny famborahana ny ao am-pontsika amin’ireo izay mahatakatra antsika sy manana fahatokiana fa hanao izay hahasoa antsika izy ireo. Manatona Azy amim-pahatokiana isika ary misandratra ny lohantsika mba hahitantsika fahasoavana sy hatsaram-panahy hanampy antsika amin’ny fotoan-tsarotra. (Hebreo 4,16Alao sary an-tsaina hoe tsy mila manahy intsony isika momba ny teny diso, ny fotoana tsy mety, na ny fihetsika tsy mety amin’ny vavaka ataontsika. Manana mpisoronabe isika izay tsy mijery afa-tsy ny fontsika. Tsy manasazy antsika Andriamanitra. Tiany ho takatsika fa tena tia antsika izy! Tsy ny finoantsika na ny tsy fisiany, fa ny fahatokian’Andriamanitra no manome dikany ny vavaka ataontsika.
Miresaha amin’Andriamanitra mandritra ny andro. Lazao aminy marina ny momba anao. Rehefa faly ianao dia lazao hoe: “Andriamanitra ô, faly aho. Misaotra anao tamin'ny zavatra tsara teo amin'ny fiainako. " Rehefa malahelo ianao dia lazao hoe: “Andriamanitra ô, malahelo aho. Ampaherezo aho, azafady.” Raha misalasala ianao ka tsy mahafantatra izay tokony hataonao, dia lazao hoe: “Andriamanitra ô, tsy hitako izay hatao manaraka. Mba ampio aho hahita ny sitraponao amin’izay rehetra miandry ahy.” Rehefa tezitra ianao, dia lazao hoe: “Tompo ô, tezitra mafy aho. Mba ampio aho mba tsy hiteny zavatra hanenenako any aoriana any." Angataho Andriamanitra hanampy anao sy hatoky azy. Mivavaha mba ho tanteraka ny sitrapon’Andriamanitra fa tsy ny azy. Ao amin'ny James 4,3 Hoy izy hoe: “Mangataka ianareo, nefa tsy mahazo na inona na inona, satria ratsy fanahy no angatahinareo, dia ny handanianareo izany amin’ny filanareo”. Raha te hahazo ny tsara ianao dia tokony hangataka ny tsara. Avereno andinin-teny na hira ao amin’ny Baiboly mandritra ny andro.